Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – चित्कार उन्मुक्तिको…
लेखक: सुदर्शन लिम्बु
आदर्श खाना खाईवरी पलंगमा ढल्केर बसी रहेको छ के के सोंच्दै ! मनमा अनेक कुराहरू खेलीरहेका छन् प्रश्नहरूसंगै! उता कोठामा आमा र बहिनी नियमित टिभीको धारावाहिक हेर्दै हाँसेको उसको कानमा परिरहेको छ! घरको दैनिक चलन यस्तै हो उसको घरमा! नौ बजे सम्म आमा र बहिनी सब चुल्हा चौकाको काम सकेर कुनै धारावाहिक छुटाउँदैनन् दुवै! आदर्श कहिले काहि अबेर रात सम्म पढ़ी बस्छ खाना खाईवरी पनि! आज हातमा किताब राखेर भित्तामा एकनास हेरीरहेको छ! कसो कसो गर्दा उसको आँखा भित्ताको कुनामा एउटा संघर्ष गरीरहेको माकुरामा पर्यो! त्यो माकुरा कोशिष गर्छ निरन्तर जालोको धागोमा चड़्न तर फेरि ओरालै झरि पठाउँछ तर कोशिष गरीरहेको छ! आदर्शले निकै चाख मानेर त्यो सानो माकुराको कोशिष गर्ने क्रम हेरी रहेको छ “स्याबस् चड़् चड़्”भन्दै ! सानो छँदा प्राइमेरी स्कूलमा पढ़ेको “रोबर्ट ब्रुस” को कथाको जीवित प्रदर्शन हेर्न पाउँदा खुशीले गद्गगद् त्यो सानो प्राणीलाई प्रोत्साहन गर्दै बोल्दैछ उ ! अन्तमा त्यो माकुरा चड़ेरै छाड़्यो ! “ब्रेबो लिटल स्पाइडी ! वेलडन् !” त्यो माकुराको सफलतामा आदर्शले सन्तुष्टीको लामो श्वस फेर्यो ! खुशी हुँदै किताब टेबलमा राखेर कम्बल तानेर गुटुमुटियो आदर्श ! अर्को कोठामा आमा छोरीको श्रृंखला जारी छ !
“ओइ आदित्य यो शनिवार तेरो बाइक् लान्छु ल दिन्छस्? अमरले हक डकेर लान्छु भनी सकेर सोधी टोपल्दै छ !
आदर्श खितिती हाँस्दै “ओई आदित्य बाइक चै तेरो हो कि एस्को हो हौ? आम्बो जैले नी बाइक त एस्ले पो रेस खेल्दै गरेको हुन्छ त?” आदित्य पनि हल्का रवाफ दिँदै “अँ यो ढाड़ेको काम नै के छ र मामाको घोड़ा मेरो ही ही” माम्सहरू म भइञ्जेल् गरोस् मस्ती ! उल्टा “दिन्छस्” रे हा हा! चाबी जहीँ लुकाएनी जामा लाउनेले निकालेर लान्छ!”
“आँ सोम तेती सार्हो नभन्न हौ मेरो नी ल्याए पछि तैँले नै ओपनिंग गर्न ल माम्स् !” अमरले हल्का तेल दल्दै छ! “चुपलाग् तँ ढाड़े”आदर्शले अमरको टाउकोमा प्याट्ट हिर्काउँदै “तेस्लाई केटी घुमाउनु बाइकनै चाइने रे !” ओइ आदित्य यार अलिक चाप्न हौ मेरो ९:४५ को इम्पोर्टेन्ट क्लास छ मिस् हुन्छ!” “चुप लाग् है तँ बुक वर्म चै एक त हेल्मेट लगाको छुइन उल्टा बाइकमा दुईदुई जना बस्दी” नकरा है बेसी” आदित्यले हल्का रिसाको जस्तो गरे! अमरले झन् रिस् उठाउनलाई कुरा थप्यो,”ओइ सोम् ले त म चलाउँछु तेरो साइकल जस्तो चलाईले त हाम्रो आदर्श ज्ञानीले आफ्टर्रनुन् क्लास पनि भ्याउँदैन जस्तो छ !” “ढाड़े तेरो ढाड़ भाच्छु पर्खी तेरो जीएफकै छेउमा कलेज त पुगौं! आदित्यले गियर चेन्ज गर्दै एक्सेलेटर चाप्दैछ अमरसंग झोक्किन्दै ! काकझोड़ाको तेर्सो यी तीन मलसापरे जोड़ीहरू ट्राफिक छिचोल्दै कलेज तर्फ हाक्किरहेका छन्!
यी तीन आदर्श,आदित्य र अमरलाई सबैले मलसापराको जोड़ी भन्छन् ! हाई स्कूलमा भेट भएर कलेज सम्म एउटै कलेजमा दाखिला लिए-दार्जीलिंग गवर्मेन्ट कलेजमा ! जहाँ जाउ संगै हुन्छन् ! कलेज ,बजार,चौरस्तातिर टोलिने देखि लिएर फिल्म हल समेत संगै जान्छन्! कोई बेला ग्रामीण भेकतिर जान्छन् घुम्न ! गाँउ घरको पृथक जीवन भोगाईमा रम्न पुग्छन् ! यी तीन युवाहरू मध्ये आदर्श धेरै संवेदनशील छ! समाजको बदलिन्दो परिवेश,फ्यातुलो राजनितीको उतार चड़ाउ,बेरोजगारी,युवाहरूको पलायन,जीवन शैलीको तेज परिवर्तन,देशको राजनितीक अन्तर कलह हरूले उसलाई धेरै असर पुर्याएका छन् ! बिशेषत; आफ्नो गोर्खा जाति र समुदायको उत्थान र बिकाशको दिशातिर कसरी उन्मुख गराउन सकिन्छ भन्ने बिचारमा डुबी रहन्छ सदैव !दुई साथीहरू भने युवा अवस्थालाई खुलेर मनोरञ्जन गर्ने कुरोमा बिश्वास गर्छन् ! कलेज जीवन पढ़न मात्र हैन रमाईलो गर्न पर्छ भन्छन् दुवै!
“अदिती ओई अदिती मेरो चार्जर चलाइस्? तँ चै आफ्नो समान चला ल ! चलाएर ठाँउमै राख्नु जान्दैनस्? ” आदर्श झोक्किन्दै अदितीको कोठामा दराजको ड्रवर खात्रंग र खुत्रुंग गर्दैछ! अदिती दौड़ेर कोठामा आई ! ” के भो दादा तिम्लाई चै? मेरो चार्जर बिगार्ने चै को पो होला? किन्दिने पनि हैन एकछिन चलाको चाई हाल्यो रे! लाड़े पल्टिन्दै आमा भाकोतिर गई र ” हेर्नु न मम्मी मेरो चार्जर अस्ती बिगार्देको किन्देको पनि छैन ! तँपाईले चै दादालाई मात्र किन्ने पैसा दिनुभो है?” अदिती रून्ची मुख गर्दै गनगनाई रहेकी छ!
“चुप लाग् स्कूल छिचेली सकेको छैनस् मोबाइल चलाउँछस् !” आदर्श चार्जर हातमा बेर्दै बहिनी चै को कोठाबाट निक्लिन्दै उसको कोठामा पस्यो ! “हो त चलाँछु त अन्त तिम्रो जस्तो महंगो त छैन नी ! हेर न यो पाली पापा आँउदा तिम्रो भन्दा दामी किनी मांग्छु ” ! अदितीले म पनि के कमी भन्ने चुनाउती दिए दाज्यु चै लाई ! “अन्त सिगरेट खाको चै भन्दिन्न नी ल पापालाई” भन्दै अदिती खुब जिस्काई रहेकी छ आदर्शलाई हाँस्दै ! आमा नी कराउँदै निस्की भान्सा कोठाबाट, “तँहरूलाई ऐले हेर् है भेट भयो कि कुकुर बिरालो जस्तो झगड़ा पर्न थाल्छ ! ओई अदिती दुई बजी सक्यो दादालाई बोला खाजा खानु भोक लागी सक्यो ! यो घरमा काम कैले सकिने हैन” !भन्दै फेरि भान्सातिरै पसी !
यो सानो परिवार दार्जीलिंग शहरको एउटा किरायाको घरमा बसेको धेरै वर्ष बितीसकेको छ! मेजर साहबले छोरा छोरी शहरमा बाठो टाठो हुन्छन् भनेर चिया कमान छोड़ेर शहरमा राखेर पढाई राखेको छ ! छोरा छोरीकै शिक्षा सोंचेर फौजी जागिरको कार्यकाल बड़ाएको छ ! फौजी मिजाजको बुड़ोलाई समाजमा सबैले इज्जत पनि गर्छन् !
“ए अमर नानी के छ धेरै दिनमा पो आएछौ त” ” नमस्ते आन्टी ! संच्चै छु !आदर्श छ आन्टी?” अँ नानी कोठामै छ, जाउन भित्रै! अमर सिधै आदर्शको कोठामा छिर्यो! “ओइ ब्रु के हो आम्बो फोन त उठा कमसेकम तँ त के हो हिज आज जामा लाउने न फोन गर्छस् साला !”
“आम्बो ढाड़े पो रैछ म त को पो होला मम्मीसंग बोल्ने बाहिर भनेको त! आईजा बस्न !” आदर्शले उसको पलंग छेउको मेच देखायो ! “भन् ढाड़े के छ तेरो? आदर्शले हात मिलाउदै सोध्यो ! “अल् वेल् बड्डी! तँ पो भन्न के छ पहेंलो पहेंलो पो भएछस् त !हेब्बी पढ़्दैछस् के हो सोम तँ त ?” “हैन सोम अचेल सोसियल मिडीयामा लिटल एक्टिभ हौ ! अँ त्यो अदिते चै आएन?” “तेस्लाई फोन गरेको थिए,सिलगड़ी पो जाँदैछु ड्याड्को कन्ट्र्याक्टको माल ल्याउनु भन्दैथ्यो !” अमरले जवाब दियो ! ” अब त्यो पनि कन्ट्र्याक्टर साहब हुन लाग्यो क्या हो?” आदर्शले खिसिक्क हाँस्दै भन्यो ! “होला नी माम्स् अब हाम्रोहरू के गरोस् त हग्ने पाद्ने कन्ट्रयाक्टर हिज आज अन्त ! अरू काम त पाए पो !” अमरले कुरा थप्यो !
“अँ ओइ ब्रु त्यो जेनेटिक्सको नोट्स पनि ल्याउनु आको अन्त हल्का बुझाई पनि दे न खै मैले त केइ बुझिन हौ ! अमरले निकै पढ़ाईको चासो दिदै अनरोध गर्यो !”अँ तैले बुझ्दैनस पनि क्लासमा अन्त ‘लबेटिक्सको’ ध्यानमा हुन्छस् साला !” दुवै पढ़ाईको कुरा गर्न थाल्यो ! आदर्शले सहज ढंगमा अमरलाई विषयमा पारंगत गरी दियो र अमरलाई केहि नोट्सहरू पनि दियो ! आदर्श पढ़ाईमा पनि अव्वल छ! साथीहरू उसैलाई सोध्छन् नबुझेका कुराहरू ! पढ़ाई छोड़ी खेलकुद, साहित्य लेखनतिर पनि उत्तिकै रूची राख्छ! उसको धेरै लेखहरू,कविता ,कथा औ अन्य रचनाहरू कलेज म्यागजिन र स्थानिय खबर पत्रिकाहरूमा प्रकाशन भैबस्छ !
“ओई आदि यो पालिको कार्निभलमा मस्ती गर्नु पर्छ है ! अल इण्डियाबाट हेवी मेटल व्याण्डहरू पनि आउँदैछ !” हामी पनि पर्फम गर्दैछौं !” अँ गर् कि तर तेरो त्यो डेथ मेटल सेटल चै मलाई पच्दैन है बुझ्दिन पनि ! बरू ज्याज ब्लूजहरू चै अलि इन्ट्रेस्ट लाग्छ हौ !” ” आम्बो मेटल बुझिस भने नी एस्तो मजा आउँछ ब्रु ! लििरक्स हेब्बी हुन्छ नी !” अमरले कन्भिन्स गर्ने चेष्टा गर्दैछ ! “ल ल मेटल गुरू बुझा न मलाई ल प्रोग्राम पछि हा हा हा !” आदर्शले हल्का खिसी गरेको जस्तो गर्दियो ! तिनीहरूको गफको मध्यान्तारमा अदितीले चिया र बिस्कुट लिएर आई ! “अमर दादा चिया खानु होस् है ” भन्दै चिया र बिस्कुट टेबलमा राख्दिन् र “दादा ना तिमी पनि भन्दै आदर्शलाई कप थमाई ! दुई साथीहरूको लामो गफ पश्चात अमर बाटो लाग्यो आदर्शलाई भोलि बिहान कलेज जानलाई “पर्खी है” भनी राखेर !
शनिबार साँझ छ बजी सकेको छ ! आदर्श भर्खरै बजारबाट आएर पलंगमा ढल्कीरहेको छ ! उ एक्लै सुटुक्क बजार गएको थियो भाषण सुन्नलाई ! आज एक क्षेत्रिय पार्टीको जनसभा थियो र बजारमा निकै घुँइचो पनि लागेको थियो ! तर नेताहरूको वर्षौं देखि सुन्दै आएको त्यै एउटै कथा एउटै आश्वसन सुनेर आदर्श अध्यारो मुख लाएर फर्केको थियो ! सिरानी भित्तामा अड़ेस लाएर कोठाको सिलिंगमा एकटक हेरीरहेको छ !फेरी के मन भयो कुन्नी छेउमा राखेको मोबाइल तानेर फेसबुक अपडेटहरू सर्सर्ती हेर्यो ! “खासै चाखलाग्दो कुराहरू छैन रैछ” मनमनै बोल्यो ! र ट्युटरमा लग-इन् गर्यो ! नोटिफिकेसन धेरै रहेछ ! धेरैले उसको ट्युइटको रिट्युइट गरेका रहेछन् ! उसले पनि सबै फलोवर्सको ट्युइटहरूलाई रिट्युइट गर्यो र सबै प्रमुख अपडेटहरू ध्यान दिएर पढ़ीरहेको छ ! स्थानिय लगायत देशको विधमान समस्यामा आधारित विभिन्न ट्रेन्डहरू मन परेको लाइक र रिटुइड गर्यो साथै कति वटामा फटाफट् जवाबहरू पनि दियो ! हिज आज आदर्श सोसियल मिडियामा धेरै एक्टिभ भएको छ ! विशेष ट्युटरमा ! पहाड़को विभिन्न समस्याहरू लिएर ट्युइट गरी बस्छ ! धेरै फलोवरहरू पनि कमाएको छ साथै फलो पनि गरेको छ! स्थानिय लगायत देशको विभिन्न विभागका कार्यकारी मंत्रीमंडल र मन्त्रीहरूको अफिसियल ट्युटर हेन्डलहरू फलो गर्नुको साथै पहाड़को विभिन्न समस्याहरूमा आधारित सोझै ट्युइट गर्छ सबैलाई र जवाब पाउँदा खुशी हुन्छ !
पहाड़को आर्थिक र सामाजिक बिकाश,धरोहर,प्राकृतिक सम्पदा,जनजीवनको स्तर,गरिबी,चिया बगानको विधमान समस्याहरू र मजदुरहरूको हक अधिकार,शिक्षित युवा पिढ़ीहरूको बेरोजगारी,शिक्षा स्तर ,सामाजिक कुरीति,रूढीवादी चलन,अन्धबिश्वास,जातिय भेदभाव यी यथावत कुरोहरू बारे लेखी रहन्छ औ सोसियल मीडियामा सांझ्ने गर्छ ! विशेष युवा पिढ़ीलाई प्रोत्साहन गर्ने,जगाउन कुरोमा धेरै ध्यान दिन्छ उसले ! वर्तमान समयमा सोसियल मीडिया एक प्रभावशाली माध्यम भएको र सामाजिक जागृतिको निम्ती एउटा साधारण व्यक्तिले पनि समाजको विभिन्न विषयमा आफ्नो भावना र अभिव्यक्ती व्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने उसको धारणा छ ! तकनिकीले चरम उंचाई ओगटी सकेको र विश्वलाई एउटा सानो गाँउ जस्तो मात्र तुल्याएको समयमा हामी कति सचेत र शिक्षित भैसकेका छौं त ?भन्ने प्रश्न आफैलाई गर्छ कहिले काहि! सोसियल मीडियालाई सकरात्मक ढंगले प्रयोग गरी समाजमा क्रान्ती ल्याउन सकिन्छ समाजको उत्थानको निम्ती भन्ने कुरोमा उ बिश्वस्त छ ! पहाड़को राजनितीक परिवेश,क्षेत्रिय पार्टी र नेताहरूको फूट माथि टिप्पणी गरी बस्छ ! एकता कायम गरेर लड़े सरकारलाई गोड़ा टेकाउन सकिन्छ र पहाड़को आकांक्षा औ एक मात्र लक्ष्य गोर्खाल्याण्ड प्राप्त गर्न सकिने कुरोमा उसलाई कुनै शंका छैन ! तर राज्य सरकारको जातिय विभाजनको शिकार बनेको पहाड़ सम्झिन्दा नेताहरूलाई कहिले सराप्छ त कहिले गाली गर्छ !
हालैको स्थानिय मीडिया पेजको पहल र आह्वनमा अनलाईन एक्टीभिस्टहरूले चलाएको ट्युटर ट्रेन्ड ‪#‎गोर्खाल्याण्डमा‬ उसले पनि सशक्त रूपमा साथ दिएको थियो तर त्यो अभियान असफल हुँदा धेरै दुखी पनि बने ! तर चिया कमानको विधमान समस्याहरूको समाधान हेतु आदर्श र उसको साथीहरूले चलाएको अनलाईन एक्टीभिटीले सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्रीको ध्यानकर्षण गरे बापत केहि हदसम्म समस्याको समाधान भएकोमा उनी धेरै खुशी भएको थियो !
आदर्शले जीन्दगीलाई सकरात्मक दृष्टिकोणमा हेर्ने गर्छ ! उ एक आशावादी युवा हुनुको साथै समाजको निम्ती प्रेरणाको स्रोत पनि थियो ! सधैं हसिलो मुहारमा सबैलाई प्रोत्साहन दिने आदर्श तर आज भने निकै मलिन् भावमा गहिरो सोंचमा डुबी राखेको छ ! पहाड़को तमाम जल्दो बल्दो समस्याहरूको ताँतीले उसलाई दुखी बनाएको छ ! लामो आंग तान्दै उसले पलंग छेवैको ड्रवरबाट कलम निकाल्यो र टेबलमाथिको कपी तानेर पन्नामा केहि कोर्न थाल्यो !
मनमा उर्लिएको भावनाको बाढ़ मथिंगलसम्म पुग्दा उसको आत्माको चित्कार शब्दहरूको रूपमा कपीको पन्नामा जीवन्त भयो !
उसले लेख्यो शिर्षकमा ; “चित्कार उनमुक्तिको”
The Global listing 100 most impactful CSR leaders Award for Prashant Rai “THE WAY WE ARE: Dark tales from the Himalayas” at Amazon India
99,940 total views, 1,477 views today
Delegation of FIGA headed by Anjali Sharma Bhujel met Governor of West Bengal in Darjeeling on Friday and submittedamemorandum, highlighting the political issues of Darjeeling hills and Gorkhaland. Currently Governor is in Darjeeling. [Pic from Khabarmagazine] 99,978 total views, 1,478 views today Comments comments
99,978 total views, 1,478 views today
Sabina Rai from team Run With Roshni is the winner of Aircraft Carrier Run-21km at WNC Navy Half Marathon. 103,287 total views, 1,477 views today Comments comments
103,287 total views, 1,477 views today
The breathtakingly beautiful sunsets of Darjeeling are best enjoyed with your fingers entwined with your partner’s. 99,899 total views, 1,477 views today Comments comments
99,899 total views, 1,477 views today
103,277 total views, 1,478 views today